The Rohingya News Bank : အေအေ
Showing posts with label အေအေ. Show all posts
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲများအဆုံးသတ်ရန် တတိယအင် အား စုလိုအပ်နေ
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် တပ်မတော် နှင့် အေအေတို့အကြား ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများကို အဆုံး သတ်ရန်အတွက် တတိယအင်အားစုတစ်ခု လိုအပ်နေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Christine Schraner Burgener က နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်၌ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Christine Schraner Burgener နှင့် အဖွဲ့သည် ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံကျော်လှအား နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီက ရခိုင်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ရုံး၌ တွေ့ဆုံစဉ် ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Labels: 2019, Christine Schraner Burgener, mm, တပ်မတော်, ရခိုင်မြောက်ပိုင်း, သတင်း, အေအေ
ရခိုင်စစ်မီး ဘာကြောင့် ကြီးထွားလာသလဲ - အေအေ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်နဲ့ ဘီဘီစီ မေးမြန်းခန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အေအေ တို့အကြား စစ်ရေးအရှိန်မြင့် တက် လာနေပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်က စစ်မီး ဘာကြောင့် အရှိန်မြင့်တက်နေရတာလဲ။ နောက်ပြီး အာဆာနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအကျပ်အတည်းအပေါ် အေအေက ဘယ်လို ရှုမြင်သလဲ၊ ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ … စတာတွေကို ဘီဘီစီအကြီးတန်းသတင်းထောက် စောရန်နိုင်က အေအေ စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကို ပန်ဆန်းမြို့မှာ သီးသန့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းထားပါတယ်။ --- --
Labels: 2019, mm, Video, ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်, ဘီဘီစီ မြန်မာ, မေးမြန်းခန်း, အေအေ
ရဲဝန်ထမ်းမိသားစု ၇ ဦး မြောက်ဦးဆေးရုံသို့ကောင်း မွန်စွာရောက်ရှိလာကြောင်း ဆရာဝန်ကြီးအတည်ပြု
ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) မှ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည့် ရဲဝန်ထမ်းများ၏ ဇနီးများနှင့် သားသမီး ၇ ဦးတို့သည် ယမန်နေ့ ညဉ့်က မြောက်ဦးဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်မှာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း မြောက်ဦးခရိုင် ဆရာ ၀န်ကြီးက နိရဉ္စရာ သတင်းဌာနသို့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
Labels: 2019, mm, နိရဉ္စရာ, ဖမ်းဆီး, ပြန်လည်ရောက်ရှိ, ဆေးရုံ, မြောက်ဦးမြို့, အေအေ
ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင်စစ်တပ် (AA) တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားပြီး စစ်ရေးတင်း မာ နေသည်မှာ ၄ လကျော် ရှိပြီဖြစ်သည်။
နှစ်ဖက်တပ်အကြား အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးနိုင်ရေးအတွက် ကိုယ်စားလှယ်များ တွေ့ဆုံမှု ရှိသော် လည်း ပြေလည်ခြင်း မရှိသေးပါ။
Labels: 2019, AA, ARSA, mm, ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်, ဧရာဝတီ, မေးမြန်းခန်း, အေအေ
နိုင်ကွန်းအိန်၊ 11 ဧပြီ၊ 2019
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ လက္ကာကျေးရွာသား ၂၇ ဦးကို တပ်မတော်ကနေ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွား တယ် လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ AA အဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် မသင်္ကာသူ တွေကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း တပ်မတော်က ထုတ်ပြန်ပြောထားပေမဲ့၊ ဒေသခံတွေနဲ့ ကျေးရွာတာဝန်ရှိ သူတွေ က တော့ အခု အဖမ်းဆီးခံသူတွေဟာ AA အဖွဲ့ဝင်တွေမဟုတ်ဘဲ ကျေးရွာလုံခြုံရေး ကင်းစောင့် အဖွဲတွေ လို့ ပြောဆိုပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းသတင်းထောက် နိုင်ကွန်းအိန်ကနေ သတင်း ပေးပို့ထား ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, ဖမ်းဆီး, ဗွီအိုအေ, မြန်မာ့တပ်မတော်, ရခိုင်, မြောက်ဦးမြို့, အေအေ
ကြောက်လန့်ပြီးသတိလစ်နေသူသပြေကန်စစ်ရှောင် စခန်းမှ မိန်းခလေးကို မြောက်ဦးဆေးရုံ ပို့ဆောင်
နိရဉ္စရာ၊ ဧပြီလ ၅/ ၂၀၁၉
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ သပြေကန်ကျေးရွာတွင် ခိုလုံနေသော စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များထဲမှ ကြောက်လန့်ပြီး သတိရတစ်ချက်၊ မရတစ်ချက် ဖြစ်နေသူ အသက် ၂၁ အရွယ်ရှိ မိန်းလေးတစ်ဦးကိုမြောက် ဦးဆေးရုံသို့ ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့က ယူဆောင်သွားရသည်ဟု စခန်းတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးမောင်သိန်း တန်က ပြောကြားသည်။
Labels: 2019, mm, စစ်ဘေးဒုက္ခသည်, တိုက်ပွဲ, နိရဉ္စရာ, မြန်မာ့တပ်မတော်, မြောက်ဦးမြို့, အေအေ
K.K.P. ဧပြီ.၂ .၂၀၁၉
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်(AA)အမည်သုံး၍ ပြည်တွင်းသတင်းဌာနများကို ခြိမ်းခြောက်သတိပေးစာ များပေးပို့ ခဲ့ ခြင်းဖြစ်စဉ်သည် ယင်းတို့ AA တပ်ဖွဲ့နှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း တပ်ဖွဲ့ပြောခွင့်ရသူ ခိုင်သုခက ငြင်းဆိုလိုက်​ပါတယ်​
Labels: 2019, K.K.P, mm, တုန့်ပြန်, ခြိမ်းခြောက်စာ, ရခိုင် တပ်မတော်, အေအေ
ရခိုင်ပြဿနာ နိုင်ငံရေးနည်းဖြင့် အမြန်ဆုံးအဖြေရှာ ကြပါ
Urgent Political Action Needed to Solve Rakhine’s Problems ( ဘာသာပြန် )
၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွင်း ကချင်ပြည်နယ် မိုင်ဂျာယန်တွင် ပြုလုပ်သော ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ AA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင် တက်ရောက်လာစဉ် / ဧရာဝတီ
ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အကြိုတွင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တခု ဖြစ်သည့် ရက္ခိုင့် တပ်မတော်(AA) က ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်း ၄ ခုကို တပြိုက်နက် တိုက် ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ သေဆုံးခဲ့ရပြီး AA က နောက် လာ မည့် ရက်သတ္တပတ်များနှင့် လများ အတွင်း တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်တိုက် ပြုလုပ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်အစိုးရသို့ အချက်ပေးခဲ့သည်။ တိုက်လည်း တိုက်ခဲ့သည်။ မတ်လ ၉ ရက်နေ့က ရခိုင်ပြည် နယ် မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အတွင်းတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ တပ်ဖွဲ့များနှင့် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားစဉ် အတွင်း တပ်မတော်၏ ယာယီစစ်ဗျုဟာ စခန်းတခုကို သိမ်းပိုက်၍ စစ်သုံ့ပန်း ၁၁ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း AA က ကြေညာခဲ့သည်။
Labels: 2019, ANP, ARSA, Confederate, IG, mm, NLD, ရခိုင်ပြဿနာ, ဆောင်းပါး, ဒေါက်တာအေးမောင်, အေအေ
AA ကို ချေမှုန်းရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြား မှု သိသင့်သိထိုက်၍ ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်ဟု တပ်မတော် ပြော
By သတင်းအဖွဲ့ On
ချောက် Issue No.
ရခိုင်လက်နက်ကိုင်အ ဖွဲ့(AA)ကို ချေမှုန်းရန် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မှာကြားခဲ့ခြင်းကို တပ်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမှာ သိသင့်သိထိုက်၍ထုတ်ပြန် ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး ကော်မ တီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းညီ က ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထိုသို့မှာကြားချက်ကို ဇန်န၀ါရီ ၁၈ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော တပ်မ တော်သတင်း မှန် ပြန်ကြားရေး ကော်မတီ၏ သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲ၌ ထည့်သွင်းရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်း ထောက် တစ်ဦးက မတ်လ ၂၅ ရက်က ကျင်းပသည့် တပ်မတော်သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲတွင် မေးမြန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Labels: 2019, mm, မြန်မာ့တပ်မတော်, သတင်း, ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်, အေအေ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့၊ ကျေးရွာများတွင် အေအေအဖွဲ့ကို လက်မခံရန် တပ်မတော် သတင်းထုတ်
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း မြို့၊ ကျေးရွာနဲ့ ရပ်ကွက်တွေမှာ အေအေအဖွဲ့ကို လက်မခံဖို့နဲ့ ရွာထဲဝင်လာပါက အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကို သတင်းပေးပို့ဖို့ တပ်မတော်က မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ သတင်းထုတ် ပြန် လိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, mm, တပ်မတော်ပြန်ကြားရေး, ဒီဗွီဘီ, ရခိုင်ပြည်နယ်, အေအေ
မြောက်ဦးက တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကို လေးဘက်လေးတန် ကနေ ပစ်တယ်
မြောက်ဦးမြို့ဟာင်းတနေရာ / ဧရာဝတီ
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်အတွင်း မတ် ၁၈ ရက် ညပိုင်းက ပစ်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပွားပြီး ၈ နှစ်အရွယ် က လေးငယ်တဦးအပါအဝင် အရပ်သား ၇ ဦး ကျည်ဆံနှင့် လက်နက်ကြီးကျည်များ ထိကာ ဒဏ်ရာ ရရှိ သည်။ မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ ရွာဟောင်းတောကျေးရွာအတွင်းသို့လည်း လက်နက်ကြီးကျည်များ ကျပြီး နေအိမ် တလုံး မီးလောင်သွားသည်။
Labels: 2019, mm, ဗိုလ်မှူးကြီး ဝင်းဇော်ဦး, မြောက်ဦးမြို့, မေးမြန်းခန်း, အေအေ